SBS On Demand v3.1.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း v3.1.1 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး SBS On Demand
SBS On Demand ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Demand ကိုတွင် SBS နှင့်အတူခြားနားချက်၏လောကဓာတ်သို့ချိတ်ဆက်ရန်
Discover အခမဲ့အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆို, တာဝန်ယူထားသောအွန်လိုင်းသြစတြေးလျကနေအကြောင်းအရာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ပရီမီယံ၏ 7000 ကျော်နာရီနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်ဖျော်ဖြေရေးမှုတ်သွင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်မတူကွဲပြားမှုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သောကမ္ဘာ၏တစ်ဦး shared အတှေ့အကွုံရန်သင့်အားဆက်သွယ်။ အဲဒီလမ်းကိုသင်ရေတွက်သောပုံပြင်များမှပိုမိုနီးကပ်စွာရ။
သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုးပေါ်တက်ဖမ်းဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်ဒရာမာစီးရီး streaming စတင်ဟာသ, မျက်မှောက်ရေးရာ, အားကစားသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များ, သင်ကဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ချင်ရှိမရှိဒါ။
သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် network ကိုကျော်ဝယ်လိုအား app ကိုတွင် SBS ရဲ့ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်လျှင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့သင့်ရဲ့ဒေတာခွဲတမ်းယူသင့်ပါတယ်။ သင်ဤခွဲတမ်းကျော်လွန်သင့်ကြောင်း, သငျသညျအပိုကုန်ကျစရိတ်များပေးချေရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒီ app ကိုသငျသညျစျေးကွက်သုတေသနအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် Nielsen ရဲ့စီးပွားဖြစ်တိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/au/en/optout.html ဖတ်ရှုပါ။
SBS On Demand အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SBS On Demand အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
SBS On Demand အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
SBS On Demand အား အခ်က္ျပပါ
calvinpanda စတိုး 1 982
SBS On Demand ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း SBS On Demand အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း v3.1.1
ထုတ်လုပ်သူ Special Broadcasting Service Corporation
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.sbs.com.au/aboutus/corporate/view/id/113/h/SBS-Privacy-Statement
လက်မှတ် SHA1: 18:A8:21:CE:67:2F:5C:7B:66:FC:42:10:DE:83:17:53:1E:E3:7C:6A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): SBS Australia
အဖွဲ့အစည်း (O): Special Broadcasting Service
နယ်မြေ (L): Artarmon